Gabadh u sameysay gabdhaha Soomaaliyeed naadi nacfi u leh - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Golaha Hal-abuurka hablaha Soomaaliyeed
Gole ay ku mideysan yihiin gabdhaha Hal-abuurka leh ee Soomaaliya ayaa waaxaa laga dhisay dalka Norway.
Naadigan ayaa sidoo kale ka howlgala qeybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo ay aas aastay gabar da'yar oo deggan dalkaasi Norway.
Maxay tahay u jeedka loo asaasay Naadigan?
Golaha hal-abuurka gabdhaha Soomaaliya ayaa waxaa loogu talagalay in gabdhaha lagu dhiirageliyo in ay soo bandhigaan waxyaabaha ay ku haminayaan ee ay jeclaan lahaayeen in ay sameeyaan, sida ay sheegtay Yaasmiin Jaamac.
Yaasmiin Jaamac, oo ah aasaasaha ahna gudoomiyaha guud ee golaha, oo BBC wareysi siisay ayaa sheegtay in ujeedooyiinka ugu waawayn ee loo dhisay Golahan ay tahay in la mideeyo hablaha Soomaaliya.
"U jeedooyiinkeena waxaa ka mid ah inaan mideeyo dumarka Soomaaliyeed inaan la dagaalanno tacaddiyada hablaha loo gaysto", ayay tiri Yaasmiin.
La kulan fanaan soomaaliyeed oo jacaylkiisa sugayey 22 sano
Xigashada Sawirka, Yaasmiin
Yaasmiin ayaa sidoo kale sheegtay in ujeedooyiinkooda ay ka mid yihiin in ay qeyb ka qaataan hormarinta dalka islamarkana ay hooyooyiinka dhibaateysan ay talooyiin iyo taageero siiyaan.
"Inaan ka qeyb qaadano hormarinta dalka, inaan garab istaagno hooyooyiinka tabaalaysan, inaan la talino oo wacyigalino gabadh kasta oo dhibaataysan", ayay intaa ku dartay.
Yaasmiin Jaamac ayaa sheegtay in intii ay Muqddisho ku sugnayd ay la kulantay gabdho aad u da'yar hadana markaad maskaxdooda iyo hal-abuurkood eegto aad ogaanayso in ay bulshada wax ku soo kordhin karaan.
"Intaa Xamar joogay waxaan la kulmay gabdho aad u yaryar oo hadii aad da'dooda fiiriso aad u yar laakiin maskaxdooda ay la egtahay nin 40 jir ah," ayay tiri Yamsiim.
Yasmiin ayaa sidoo kale sheegtay in hablaha ay la kulantay inta badan ay hal-abuurkooda u adeegsadaan dhanka wanaagsan oo aysan u isticmaalin dhanka xun.
"Waa gabdho yaryar oo aan 13 jir ka badnayn oo haddana jecel in dadkooda, dalkooda iyo waalidiintooda ay hormar gaadhsiiyaan", ayey tiri.
Golaha hal-abuurka gabdhaha Soomaaliyeed ayaa mararka qaar waxa ay qabtaan doodo lagu soo bandhigayo doorka ay hablaha ka ciyaari karaan arrimaha bulshada.Waxaa inta badan yar in gabdhaha soomaaliyeed ay helaan goobo ama Naadiyo ay ku soo bandhigaan Hal-abuurkooda. Gabdhaha Soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegay in ay ku jiraan Hablo badan oo leh Hal-abuur waxtar u leh bulshada balse aan fursado la siin.